अहिलेका सहकारी, हिजोका सामन्त – मुख्यमन्त्री - Samadhan News
अहिलेका सहकारी, हिजोका सामन्त – मुख्यमन्त्री
समाधान संवाददाता २०७७ चैत १२ गते १३:४६
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सहकारी संस्थाहरु पहिलाका सामन्तजस्ता भएको बताएका छन् ।
उत्पादनमा भन्दा बचत तथा ऋण सहकारी बनाएर नाफामात्रै कमाउने प्रवृत्ति औंल्याउँदै उनले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ बुधबार तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले तयार पारेको एकीकृत विकास गुरुयोजना पुस्तकको विमोचन गर्दै थिए ।
‘अहिलेका सहकारी भनेका हिजोका सामन्त हुन्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जो उत्पादनमा भाग लिएको छ, गरिबी निवारणमा लाग्या छ, आफ्ना सेयर सदस्यलाई समान ढंगले व्यवहार गरेको छ, त्योमात्रै सच्चा सकारी हो । नत्र भने हिजोको जिम्मुवाल बाले लिनुहुन्थ्यो ब्याज, सहकारीहरुले वित्तीय संस्थाले झै ऋण दिएर १७/१८ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् ।’ त्यत्रो धेरै ब्याज लिने सहकारी हुन नसक्ने उनले बताए ।
‘छोराको बिहा तामझामका साथ गर्नुप-यो सहकारीबाट ऋण लियो, घर, घडेरी जोड्नुप¥यो, सहकारीबाट ऋण लियो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा यति लगानी भयो कि नाफा ग-यो अनि बाँड्यो, अनि भ्रमण गयो, कहिले दार्जिलिङ जाने, कहिले सिक्किम जाने ।’
सहकारीहरुले लगानी धेरै गरे पनि सरकारले नियमनसमेत गर्न नसकेको उनले स्वीकारे । बन्दीपुरको गुरुयोजनामा सहकारीका माध्यमबाट समेत समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रसंग आउँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले सहकारीको शैली र ढाँचा परिवर्तनको सुझाव दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विकास भनेको भौतिक विकासमात्रै नभएको विचार पनि व्यक्त गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास अनि गरिबी निवारणको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए ।
बन्दीपुरको एकीकृत विकास गुरुयोजना निर्माण समिति संयोजक हेमराज लामिछाने क्षितिजले बन्दीपुरमा दृश्यावलोकनका लागि सिसाको पुल निर्माण गर्ने सुनाए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि उनले सुनाए । तर मुख्यमन्त्री गुरुङले दृश्यावलोकनका लागि भ्युटावर निर्माण गलत प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरे ।
‘त्यो भ्युटावरबाट के हेर्ने ? गरिबी हेर्ने ?’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘सिसाको पुल बनाउँदा त्यसले पर्यटनमा कति योगदान पु¥याउँछ ? डिपिआर खै ?’ पालिकाहरुले गुरुयोजना बनाउँदा प्रदेश र संघको योजनासँग तादाम्य मिलाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्रदेशभरका अस्पतालहरुको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा आफूहरु लागिरहेको सुनाउँदै उनले तर आवश्यकताभन्दा धेरै शड्ढयाका अस्पताल बनाउने पक्षमा नरहेको पनि जानकारी गराए । ‘अस्पताल बनाउने तर आवश्यकता अनुसारको र त्यसलाई चाहिने जनशक्ति र उपकरण पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सामाजिक न्यायबिनाको समृद्धि समृद्धि हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरे । उनले पनि उत्पादनमूलक सहकारी खोलिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उत्पादन सहकारीमा जोड दिऔं, उत्पादन बढ्दै जाँदा बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी आफैं खुल्दै जान्छन्,’ उनले भने ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माले उत्पादनमा जाने भन्ने तर त्यसको तयारी नगर्ने भइरहेको टिप्पणी गरे । ज्ञान र सीपलाई उद्यममा रुपान्तरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद रामबहादुर गुरुङ, सिडिओ सागर आचार्य, गापा उपाध्यक्ष करुण गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदी लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा बन्दीपुरका प्रतिभाहरु चिजकुमार श्रेष्ठ, डा मदन पिया र पत्रकारहरु लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।